Progesterone कसरी वृद्धि गर्न र तिमी किन चाहिन्छ?
मुख्य एक गर्भपात को कारण महिलाहरु मा हर्मोन progesterone को कमी छ। अनुसन्धान अनुसार, सर्वेक्षण गर्ने 753 महिला 62% यो हर्मोन को स्तर आंका छ। यस लेखमा हामी धेरै तरिका हेर्न हुनेछ कसरी progesterone वृद्धि गर्न हर्मोन को प्रयोग बिना स्वाभाविक। तर पहिलो, गरेको यो हर्मोन किन यति महत्त्वपूर्ण छ कुरा गरौं।
किन भने यो कम छ progesterone वृद्धि गर्न आवश्यक छ?
यो प्रश्नको जवाफ निम्नानुसार दिइएको गर्न सकिन्छ। जानिन्छ, यो menstrual चक्र मा, luteal (वा secretory) चरण तुरुन्तै ovulatory पछि हुन्छ। यसलाई त्यहाँ progesterone को स्तर मा एक प्राकृतिक वृद्धि छ कि यहाँ छ। यो एक fertilized ovum को स्वागत को लागि endometrium (को गर्भाशय को भित्री अस्तर) तयार गर्न आवश्यक छ। र जब progesterone स्तर यो प्रक्रिया कायम गर्न कम छ, यो धेरै गाह्रो गर्भवती प्राप्त गर्न बन्नेछ। किन सबै डाक्टर progesterone वृद्धि गर्न महिला सिफारिस छ। तर किन यो अपर्याप्त त खतरनाक छ?
यो तपाईं उठाउनु छैन भने त्यो सत्य हो progesterone, यो बाँझोपन निम्त्याउन सक्छ?
हो, यो साँचो हो। एक महिला ovulation हुन्छ र यदि पनि अन्डा सफलतापूर्वक कारण हर्मोन endometrium कमी गर्न fertilized छ, अझै पनि रहिरहन्छ यसको स्वागत लागि तयार। तर यो हुन्छ, र भनेर अन्डा अझै पनि थप विकास लागि गर्भाशय को पर्खाल लीन प्रबन्धन। तथापि, progesterone जुटाउने यो बिन्दुमा भने, गर्भपात को मौका बढ्छ। यदि यो हुन्छ, त्यसपछि महिला बस अर्को अवधारणा प्रयासका यो हर्मोन को स्तर पत्र गर्न आवश्यक छ। तर progesterone पर्याप्त छैन भनेर बुझ्न कसरी?
तलको भन्दा साधारण लक्षण र हर्मोन कमी को लक्षण हो:
अक्सर महिनावारी अघि छुट्टी अवलोकन;
स्तन कोमल ;
त्यहाँ मीठो व्यञ्जन लागि predilection छ;
तपाईं ovary मा एक सानो ट्युमर प्राप्त हुन सक्छ;
महिनावारी समयमा आंका शरीर तापमान;
गर्भपात र बाँझोपन सम्भव त्यसपछि।
कसरी स्वाभाविक progesterone वृद्धि गर्न?
तल यस विषयमा7सुझावहरू छन्:
तपाईं खाना बाट पर्याप्त micronutrients रही निश्चित गर्नुहोस्।
महिला मा progesterone सामान्य स्तर, तपाईँको डाक्टर समूह बी, विशेष गरी B6 को भिटामिन को स्वागत गर्न सल्लाह दिन्छन् सक्छ।
पनि वृद्धि हर्मोन म्याग्नेसियम स्वागत बढवा दिन्छ।
थप पत्तेदार तरकारी, बादाम, गुड, सूर्यमुखी बीउ, नट र सिमी खान - भिटामिन B6 र म्याग्नेसियम को राम्रो स्रोत हो।
पनि आवश्यक यी पदार्थ देखि गठन गरिएको छ देखि जैविक प्रोटिनको सामग्री लेख्न, हर्मोन छ।
लगातार त्यो महिनावारी समयमा सामान्यकृत थियो भने हेर्न, चक्र को दोस्रो आधा शरीर तापमान उपाय।
अकार्बनिक खाना जोगिन, अधिक दूध र दुग्ध उत्पादन पिउन - तिनीहरूले विभिन्न हर्मोन को उच्च स्तर समावेश गर्दछ।
गर्नुपर्छ अन्तिम अनुच्छेद ध्यान। तिनीहरूले मात्र यो पूर्ण भएकोले विशेष गरी प्रभावकारी वृद्धि progesterone, दूध र यसको सामग्रीको उत्पादन गर्न मद्दत गर्छ, तर पनि अन्य अत्यावश्यक महिला को एक किसिम हर्मोन (prolactin, somatostatin, Melatonin, ओक्सीटसिन, विकास हर्मोन, luteinizing हर्मोन, थाइरोइड उत्तेजक हर्मोन, एस्ट्रोजन, progesterone, इन्सुलिन, corticosteroids र धेरै अन्य)।
एक विशेष खाना प्रयोग गर्नु अघि आफ्नो dietician परामर्श गर्न राम्रो छ। केही समय पछि, तपाईँले "progesterone" हर्मोन लागि परीक्षण र आफ्नो स्तर के गर्नुपर्छ, वृद्धि कि पालन गर्न सकिन्छ।
पुरानो गलसुआशोथ। गलसुए र अन्य चिकित्सकीय उपायहरूको Lavage।
धेरै काठिन्य: यो के हो?
सिस्टाइटिसको प्रभावकारी उपचार
भडकाऊ हृदय रोग: संक्रामक endocarditis
पुरानो रोग - यो के हो? पुरानो रोग को कारण
के छोराछोरीको उच्च सेतो रगत सेल गणना गर्न
Mitinskoe चिहान: ड्राइभिङ संचालन र सुविधाहरू निर्देशन, घण्टा
"इमानदार," Panteleyev - सारांश र मुख्य निष्कर्ष
कंडोम को आयाम - भ्रम वा वास्तविकता?
Bibi Khanum को गिरजाघर मस्जिद: विवरण, इतिहास र रोचक तथ्य
योएल (अगमवक्ता): जीवन, भविष्यवाणी, व्याख्या। प्रार्थना र akathist योएल